Dhageyso Warbixin ku saabsan Dhalinyaro ku nool Baydhabo oo ka faa’ideysatay Sameynta Sambuuska ee Bisha Ramadaan. | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso Warbixin ku saabsan Dhalinyaro ku nool Baydhabo oo ka faa’ideysatay Sameynta...
Dhageyso Warbixin ku saabsan Dhalinyaro ku nool Baydhabo oo ka faa’ideysatay Sameynta Sambuuska ee Bisha Ramadaan.
Baydhabo(SMC)-Bisha Ramadaan Inta Badan Dadka Soomaaliyeed waxay aad u isticmaalaan oo ay Caan ku yihiin Sanbuuska inay Ku af furaan Dadka Qaar Xaafadaha ayay Ku sameystaan halka Qaarka kalena Maqaayadaha Ka doontaan.
Hadaba Maxaa Ramadaankaan Iska badalay Ganacsigaas Dadbadan Bishaan Faaida Badan Ka heli Jireen Waxaa nooga waramaya Maxamed nuur ibraahim waxaa uu ka mid yahay dhalinyarada Ka shaqeysata Sanbuuska burka bajiyada Mash-masha iyo mamacaanka kale ee inta badan laga isticmaalo Biibitooyinka maadama lagu guda jira bisha Barakeysan ee Ramadaanka .
Warbixintan waxaa inoo haysa Maryan Macalin Abshir
Previous articleDhageyso Gudiga Naafada Magaalada Baydhabo oo Codsaday in loo Gargaaro maadaama Bisha Barakeysan ee Ramadaan lagu gudi jiro
Next articleMahad Cawad “Waxaan dowlada iyo hay’adaha ugu baaqayaa in si degdeg ah loo caawiyo dadka Bacaadweyn oo roobab aay sameeyeen”